နွားခြေရာ ရေအိုင်ငယ်ထဲက လူ .. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » နွားခြေရာ ရေအိုင်ငယ်ထဲက လူ ..	24
View all posts by ချစ်ရင်ထူး II →	Blog
ချစ်ရင်ထူး II says: အပြုသဘောနဲ့ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီး .. လူအများရင်ထဲက ဆန္ဒနှင့် မိမိ၏ အတွေး ပေါင်းစပ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အတွေးသမား ဆိုရင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ..
Solid_Sn@ke says: အင်း …ကျုပ်ကိုတော့မမျှော်နဲ့..
အဟိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 299
ချစ်ရင်ထူး II says: အော် .. ကိုကိုဂီ ကလည်း .. နိုင်ငံဂျား မှာနေတော့ ကျွန်တော်တို့ ခံစားနေရတာတွေကို ကော်ပီ ပဲ ဖီလင် လို့ရမှာပေါ့ .. တစ်ခေါက်လောက်ကြွခဲ့စမ်းပါ .. ကျူပ်နှစ်မ တို့ကို ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
Solid_Sn@ke says: မထင်ပါဝူးဗျာ..
Khaing Khaing says: တော်သေးတာပေ့ါ ….. ပေါ့ပေ့ါပါးပါး မန့်ထားလို့ ချစ်ရင်ထူးပို့စ်ထဲ …….. ချစ်ရင်ထူးရေ အမပို့စ် ထဲမှာတော့ သူကပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်မန့်ထားတယ်ဟေ့ …… အမဆို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ နေရမှန်းတောင်းမသိတော့ဘူး ……. ချက်တယ် ချက်တယ် တိတ်တိတ်ချက်တယ် ………
Gipsy says: မှန်ပါတယ် သူတို့က အရိုးမစူးအောင်ပေါင်းစားနေကြတာ ..
ဆူး says: ၀ိုင်းဖဲ့ ၀ိုင်းသမ ဆွမ်းကြီးလောင်း ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား ဆိုတာ အခွန်ရုံးက လူတွေပဲ..
ချစ်ရင်ထူး II says: အနှစ်ကို မရှိဘူး :D
မောင်ပေ says: အခုခေတ် တံငါကြီးတွေက
ချစ်ရင်ထူး II says: အဲလို ဖစ်နေတယ် ဗျ ..
myanmarcitizen says: အင်း နယ်က သုငယ်ချင်း passport လာလုပ်တော့ 17 လုပ်တာဘယ်လောက်ပေးရလဲမေးကြည့်တော့ 30000 ကျပ်ပေးရတယ်တဲ့ဗျား။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ လလောက်ကပါ။ (နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကပါ)
laypai says: ဆိုင်ကယ် အစိတ်အပိုင်း တွေ ကို တစ စီ ခွဲ ပြီး ဆပ်ပြာခွက် ထဲ ထည့် လာ တော့ စစ်ဆေးရေး တွေ ဘယ်မြင်ပါ့ လဲ။
ahnyartamar says: ပပျောက်အောင် လုပ်နေတယ်တော့ ပြောနေတာ ကြာပြီ။ အခုထိတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတုန်းပါပဲဗျာ။
ချစ်ရင်ထူး II says: စိတ်ဆင်း ပလိပ် ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ..
Khaing Khaing says: ဖြည်းဖြည်းပေ့ါဟယ် ……. ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာပဲ အချိန်ကာလ တစ်ခုတော့ စောင့်ပေးလိုက်ပါ … အရိုးစွဲအောင်ပျက်စီးနေတဲ့ လူ့အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြင်ဖို့ဆိုတာ နည်းနည်းတော့အချိန်ပေးရတယ်လေ …. မိမိ မိသားစုမှာတောင် မကောင်းတာရှိရင် အချိန်ယူပြင်ဆင်ရသေးတာပဲ မတစ်ထောင်သားတွေဆိုတော့ လည်း ပိုအချိန်ယူပြင်ဆင်ရမှာပေ့ါ ……. မောင်လေးချစ်ရင်ထူး(၂)ရေ …… အရာရာကို တစ်ရာနဲ့သာဖြေပါ ကွယ် ..
myanmarcitizen says: လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုကပျက်စီးနေကြတာပါ။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကပိုဆိုးပေါ့။ (မဆိုးတဲ့သူလဲရှိကောင်း ရှိမှာပါ ဒါပေမယ့်လူနဲစုပါ) လွယ်ရမဲ့ဟာကို ခက်အောင်လုပ်ကြတယ်။ တစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ် ဆိုရင်ငါ့အိပ်ထဲဘယ်လောက်ရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးလုပ်နေကြတယ်။ မြန်မြန်ပြင်သင့်နေပါပြီ
ကိုရင်မောင် says: ငြိမ်းခါနီးမီးများပိုတောက်တတ်တယ်ကြားဘူးတာဘဲ….
ချစ်ရင်ထူး II says: ကိုရင်မောင် ကလည်း ချစ်ရင်ထူးနှစ် လုပ်ပါဗျ ..
PaLote Tote says: ကျုပ်လည်း Passport လဲဖို့ ပုံစံ ၁၇ သွားလုပ်တာ ၃ သောင်းကျပ်ပေးရပါတယ် ။ ၁ နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ ။ သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ ဆိုပြီး ခေတ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့ ။ ပိုက်ဆံလည်းပေးရသေးတယ် နောက်ပြီး သူတို့ရုံး က ပုံစံ ၁၇ လုပ်ရတဲ့အတွက် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ မပေးရပါဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာစာစီထားတဲ့စာရွက်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရပါတယ် ။ (နယ်မြို့မှာပါ) ဒီရွာထဲက CJ တစ်ယောက်ရဲ့မြို့ပါ ။
ချစ်ရင်ထူး II says: ဒါနဲ့ .. ပိုက်ဆံ ကိစ္စကို ဘယ်သူမှ မသိဘူး ထင်တယ်နော် .. နောက်ဆုံးပိုက်ဆံက နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ သိချင်လို့ပါ ..
TTNU says: ကိုချစ်ရင်ထူးရေ..
ငါမျက်စိလည်တယ်ဟဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4992
သန်းထွဋ်ဦး says: အပ်ပုန်းတွေက နယ်တွေဖက်မှာ အတော့်ကိုသောင်းကျန်းနေတာဗျာ။
marblecommet says: အနော်လည်း ရွာနဲ့
ကြောင်ကြီး says: ဘွတ်အဲ ဘွတ်အဲ.. နောင်အနှစ်ဆယ်အတွင်း စင်ကာပူခြသေ့ဂျီးကို အမှီလိုက်မည်၊ တရုတ်နဂါးဂျီးကို နောက်ကောက်ချမည်၊ အမေရိကန်သိမ်းငှက်ကို လှောင်ချိုင့်ထဲထည့်မည်။ ဘူးထွားထွားထွား…ပြောတယ်ကွာ ဒါ ငါ့လွတ်လပ်ခွင့်….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply